आफैसँग केही नहुने, आफ्नै परिवार पाल्न, आफ्नै घर-व्यवहार चलाउन धौधौ हुनेले के देलान् र हामी उँभो लाग्ने हो ?
भद्रगोल शर्मा | Published on 2016-12-28 |
गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताले केके न होला भन्ने आशा गरे । अनेक सपना देखे । जोसँग आशा गरेपनि उस्तै भयो । हैन गाँठे यसले त केही गर्छ कि भन्यो केइ न केइ । फेरि अर्को आउँछ, सपना देख्यो, उही चाल ।
योसँग त केही होला कि भन्यो, छैन । अर्कोसँग केही होला भन्यो,छैन । हुँदैन । आफैसँग केही नहुने, आफ्नै लागि केही गर्न नसक्नेसँग हामीले के आशा गर्नु ?
यसो जुँगा पालेको कोही दृश्यमा देखियो कि आशा गरिहाल्ने । दौरा-सुरुवाल लगाएको कोही आयो कि आशा गरिहाल्ने । कोट-पाइन्ट लगाएको कोही आयो कि आशा गरिहाल्ने । हामी जनता कति आशे भ'का ।
ढाका टोपी, बख्खु, हाकुपटासी, भाङ्ग्रो, घलेक, धोती-कछाडको पहिचान नचिन्नेले तिम्रो पहिचान जोगाइदिन्छु, तिमीलाई पहिचान दिन्छु भन्छ। हामी पत्याइहाल्ने । मख्ख परिहाल्ने । आफ्नै पहिचान नहुनेले कसलाई पहिचान देला ?
कोही आउँछ, विकास गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु भन्छ हामी उसैको भजन गाउन थालिहाल्ने । ए गाँठे, हाम्रो मति सुध्रिने कहिले हो ?
नेता हुन् त खाइलाग्दा, सम्पन्न, ज्ञानी-गुनी पो हुन् । बरा आफ्नै केही छैन । चन्दाले घर-व्यवहार चल्छ । पार्टीले आश्रय दिएर टिकेका छन् । यस्ता नेताबाट के आशा राख्नु ?
नेता त ट्रम्पजस्ता पो हुनु । बरु अम्बानी र मित्तल,शेष घले र विनोद चौधरीजस्ता नेता हुनु । ग्लोबलाइजेसनको जमानाछ । यस्तो महङ्गीको जमाना छ । यस्तो मुहुर्तमा एकतोले, एकलाखे र एकपाखे नेताका जनता हामी ।
त्यही भ'र पो हामी नेपालीलाई डिभी परे अमेरिका, पिआर पाए अस्ट्रेलिया/क्यानडा नभए कोरियासम्म त्यति पनि मेसो नमिले साउदी/कतार/मलेसिया/दिल्ली/बम्बई जता भएनि भासिने भूत चढ्दो रै'छ । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे । एक सातापनि नपर्खी हतार गरेर विदेश जाने काइदा यो पो रैछ!
जनमानसमा यौटा उखान प्रचलित छ- जो पोइ होलाजस्तो उही जेठाजु । अचेल 'नयाँ नेपाल'मा ठीक त्यस्तै भइरहेको त हैन ? एकसे एक हरिकङ्गालहरुले भरिएको देश हाम्रो । कठैहामी!
वातावरण संरक्षणमा सिङ्गो समाज नै अग्रसर हुनुपर्छ ः राष्ट्रपति विद्यालयलाई सघाउँदै पूर्वविद्यार्थी शिक्षकले गरे विद्यालयमा तालाबन्दी उपचारमा सजिलो बन्दै आधुनिक उपकरण घुससहित बौद्ध प्रहरी प्रमुख पक्राउ छन्दमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने More bodies found in Indonesia disaster भियतनामको राष्ट्रपतिमा कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवको उम्मेदवारी इरानमाथिका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न अदालतको आदेश टर्कीमा सात सुरक्षाकर्मी मारिए